नेपालमा रहेका १३ इन्डोनेसियनलाइ नेपालीले बस्न दिएनन्, जता जाँदा पनि लखेटिएपछि प्रहरीले भ्यानमा हालेर घुमाउँदै ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा रहेका १३ इन्डोनेसियनलाइ नेपालीले बस्न दिएनन्, जता जाँदा पनि लखेटिएपछि प्रहरीले भ्यानमा हालेर घुमाउँदै !
उनीहरुलाई बुधबार सप्तरीबाट पास दिएर काठमाडौं पठाइएको थियो । माछा पोखरीस्थित मस्जिदमा बस्ने योजना भएपनि स्थानीयले बिरोध गरेपछि उनीहरुलाई प्रहरीले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका इमाडोलस्थित मस्जिद पुर्‍याएको थियो। बुधबार राति बालाजु प्रहरीले ती इन्डोनेसियनलाई इमाडोलस्थित जामे मस्जिदको शाखामा पुर्‍याएको थियो। स्थानीयले विरोध गरी त्यहाँ पनि बस्न दिएनन्